ဒီဇယ်အင်ဂျင် Generator ကိုသတ်မှတ်မည်,ပင်မစာမျက်နှာဒီဇယ် Generator ကို,Mini ကိုလျှပ်စစ် Generator ကို
သတိပေးချက်: 1 ။ ပုဂ္ဂိုလ်များဘက်ထရီများ၏ကိုင်တွယ်နှင့်သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြအာမခံပါသည်။ ဘက်ထရီကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ (PPE) ဝတ်ဆင်။2။ ဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆေးမှုများလည်းသင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့ရပါမည်။3။ Electrolyte တွေကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသင့်လျော်သော PPE ဝတ်ဆင်။ Electrolyte တွေနှင့်အတူဖြန်းထားလျှင်, ချက်ချင်းသန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ရှင်းလင်းရန်နှင့်ဆေးဝါးအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြာလော့။4။ ဘက်ထရီမှ undiluted ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ် add ဘယ်တော့မှမ။5။ Electrolyte တွေ spillage ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြောင့်မတ်ဘက်ထရီထားပါ။ Electrolyte တွေတစ်ပျော့ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်ဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။6။ ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်သင့်လျော်သည့်အခါ insulator တွင်လည်းလက်ကိုင်နှင့်အတူ tools တွေကိုသုံးပါ။ ဘက်ထရီဆိပ်ကမ်းဖြတ်ပြီး tools များသို့မဟုတ်သတ္တုတ္ထုကိုနေရာချဘူး။7။ အားသွင်းစဉ်အတွင်းဘက်ထရီပေါက်ကွဲဓာတ်ငွေ့ကိုချွတ်ပေးသည်။ ရေတွင်းတစ်တွင်းလေဝင်လေထွက်ဧရိယာထဲမှာနှင့်ဝေးအဝတ်အချည်းစည်းမီးတောက်များနှင့်မီးစများ၌၎င်းအနေဖြင့်ဘက်ထရီကိုထားပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားသည်။ 8 ။ Generator ကို set ကို ဘက်ထရီ, ပညတ်တရားအားဖြင့်, အိမ်သူအိမ်သားစွန့်ပစ်နဲ့အတူ၏စွန့်ပစ်မခံရဘူး။ ဘက်ထရီအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဆံ့နှင့်တရားစွဲဆိုပြည်နယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်တွေအကြောင်း 33.5% w / w (6 အံ) ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ် (H2SO4) ၏တစ်ဦး Electrolyte တွေထဲမှာခဲသတ္တု (PB) ၏လျှပ်နှင့်ခဲ (IV) ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (PbO2) ပါရှိသည်။ အဆိုပါဆေးရုံကဆင်းပြည်နယ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးလျှပ်ခဲသို့လှည့် (II ကို) ဆာလဖိတ် (PbSO4) နှင့်အီလက်ထရိုသည်၎င်း၏ဖျက်သိမ်းထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်ရှုံးခြင်းနှင့်အဓိကအား water.It ဘက်ထရီလည်းလေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုမီးရှို့လျက်, ဖို့မြေဤပို့ပေးရန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်အားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်ဒီတော့ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အန္တရာယ်ရှိသောနိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကတော့မီးစက်တစ်စုံတစ်ဦးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်လျော်စွာထိန်းသိမ်းရပါမည်။ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့တဲ့ဘက်ထရီဧရိယာကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့် (တပ်ဆင်လျှင်) မဆိုပိတ်ဆို့ထုပ်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ အောက်ပါသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းနည်းများတဦးနှင့်အတူဘက်ထရီကိစ္စရှင်းလင်း: တစ်ဦးကမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၏ 0.1 ကီလိုဂရမ် (0.2 ပေါင်) ကိုအရောအနှောများနှင့်သန့်ရှင်းသောရေ 1 L ကို (1 Qt) • •တစ်ဦးအမိုးနီးယား၏ 0.1 L ကို (0.11 Qt) ၏အရောအနှောများနှင့်သန့်ရှင်းသောရေ 1 L ကို (1 Qt) နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူဘက်ထရီကိစ္စတွင်သုတ်ခြင်း။ အားလုံးဘက်ထရီဆက်သွယ်မှုသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စွာထားရပေမည်။ ယင်းမျက်နှာပြင်တောက်ပသို့မဟုတ်တောက်ပနေကြသည်သည်အထိပစ္စည်းများ clamps.Clean အဆိုပါဆိပ်ကမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကော်ဖတ်တဲ့ဒဏ်ငွေတန်းကိုသုံးပါ။ အလွန်အကျွံပစ္စည်းမရွှေ့ပါနဲ့။ ချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ပစ္စည်းအလွန်အကျွံဖယ်ရှားနိုင် terminal ကိုကာကွယ်။ အဆိုပါ Electrolyte တွေအဆင့်ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ခံလွှဲပြောင်းတိုးမြှင့်ဖို့ဘက်ထရီအတွင်းပြား / Grid (1/2 လက်မ / 13 မီလီမီတာ) ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ အရည်အဆင့်ကိုအဆိုပါပြား / Grid ကိုအောက်တွင်သည်ဆိုပါက, သာရေစက်ရေ add; အပိုအက်ဆစ်များ၏ထို့အပြင်အဆိုပါ ...
စနစ်တကျတစ် gensets ကိုရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို
5.1 တဖြည်းဖြည်းအင်ဂျင်ချမြန်ဆန်ထို့နောက်အနိုင်အထက်ချွတ်ပထမဦးဆုံး switch သည်စိတ်တော် နှင့် it.Do အင်ဂျင်ချရှောင်ဖယ်မရရပ်တန့်မတိုင်မီ idling3မိနစ်အဘို့ကိုစောင့်ရှောက် ရုတ်တရက်အရေးပေါ်ရှိမဟုတ်လျှင်။ 5.2 လာသောအခါစည်ပင်သာယာတန်ခိုးတော်အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ဘက်ထရီမှုတော်ကိုစောင့် ကျေးဇူးပြု. အဆိုပါ gensets အသုံးမပြုတဲ့ left နေကြသည်။ 5.3 အဆိုပါ gensets အသုံးမပြုတဲ့စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါရှိသမျှသောအ...
Tags: : ဂျင်နရေတာစက် မီးစက်တစ်စုံ ဒီဇယ်မီးစက်
အဆိုပါ gensets ၏ခြယ်လှယ်
4.1 အင်ဂျင်အအေးစတင်များ bacic အပေါ်ဖြစ်လျှင်,5ကခေတ္တခဏရပ်နားကျေးဇူးပြုပြီး ကိုမဆိုဝန်မပါဘဲမိနစ်; အင်ဂျင်နွေးစတင်များ၏အခြေခံပေါ်တွင်လျှင် load ကျေးဇူးပြုပြီး ရေပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြှင့်ကျေးဇူးပြုပြီးနှင့်ဝန်; ရေနံဖိအားထူထောင်ပြီးနောက် အပူချိန် to60 ထ ℃ ။ 4.2 -in ကိုခြိုးဖောကျသို့မဟုတ် 50 နာရီစောင့်ရှောက် ကျေးဇူးပြု. running-In ကာလကလျှင်သစ်တစ်ခု ကိုယ့်အနေနဲ့စစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်အင်ဂျ...
Tags: : မီးစက်တစ်စုံ ဒီဇယ်မီးစက် set ကိုထုတ်လုပ်
• ဘက်ထရီအက်ဆစ်အဝတ်အစားများနှင့်အသားအရေကိုမီးရှို့သို့မဟုတ် leaks လျှင်မျက်စိကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးစစ်ဆေးသည့်အခါအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်ပေးပါ ကြိုတင်ယင်း၏အဆက်ဖြုတ် / သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှဘက်ထရီ။ •အာမခံတပ်ဆင်ခံရဖို့ဘက်ထရီ Electrolyte တွေ၏မှန်ကန်သောအဆင့်ဆင့်နှင့်အရောအနှောနှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်အပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။ •အပေါက်တွေကိုသူတို့နေရာအရပ်များတွင်အခိုင်အမာများမှာသေချာ, တပ်ဆင်နေတယ်ဆိုရင်။ •...
Tags: : မီးစက်တစ်စုံ set ကိုထုတ်လုပ် မီးစက် batttery
Generator ကိုသတ်မှတ်ရန်များအတွက်ဘက်ထရီကို Maintenance
သတိပေးချက်: 1 ။ ပုဂ္ဂိုလ်များဘက်ထရီများ၏ကိုင်တွယ်နှင့်သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြအာမခံပါသည်။ ဘက်ထရီကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ (PPE) ဝတ်ဆင်။2။ ဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆေးမှုများလည်းသင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့ရပါမည်။3။ Electrolyte တွေကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသင့်လျ...
Tags: : Generator ကိုသတ်မှတ်မည် အသံတိတ်ဒီဇယ် Generator ကို ရီကာဒိုဒီဇယ် Generator ကို
Tags: : Generator ကိုသတ်မှတ်မည် ဒီဇယ် Generator ကို ရီကာဒို Generator ကိုသတ်မှတ်မည်
Generator ကို Pre-Start ကိုစစ်ဆေးပေးပါသည်
အဆိုပါ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများတစ်ခုအော်ပရေတာသင့်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောတာဝန်များကိုများမှာ ဆောင်ရွက်ရန်။ အဆိုပါ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများမတိုင်မီစတင်နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ရပါမည် မီးစက်တစ်စုံ : 1 ။ Key ကို Switch Off ဖြစ်ပါသည် / အဆိုပါထိန်းချုပ်ရေးပြောင်းလဲမည်အာမခံပါသည်။ တစ်ဦးကအမြင်အာရုံ စစ်ဆေးရေးသာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသင့်အကုန်အကျပြုပြင်ရေးတားဆီးနိုင်ပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှု - အများဆုံးမီးစက် set...
Tags: : Generator ကိုသတ်မှတ်မည် တတ်ဒီဇယ် Generator ကို Deutz အင်ဂျင် Generator ကို
အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့် install လုပ်ထားပြီမီးစက်တစ်စုံ။ အဆိုပါမီးစက်တစ်စုံ၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစံထိန်းချုပ်မှုစနစ်များများထဲမှတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အခြားအကိုပိုပြီးအထူးပြုစနစ်များကိုသီးခြားစာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်သောအမှု၌သီးခြားတပ်ဆင်မှုအတွက်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ဤရွေ့ကားထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်သုံးခုကိုအဓိကအစိတ်အပိ...
Tags: : Generator ကိုသတ်မှတ်မည် Generator ကိုသတ်မှတ်ရန်တတ်အင်ဂျင် Perkins Generator ကိုသတ်မှတ်မည်
တစ်ဦးက Gensets ၏ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်
အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကဒီဇိုင်းနှင့်မီးစက် set ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့ကို install ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၏လိုအပ်ချက်များကိုပေါ် မူတည်. ဒီဇယ် မီးစက်တစ်စုံ အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစံထိန်းချုပ်မှုစနစ်များများထဲမှတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အခြားအကိုပိုပြီးအထူးပြုစနစ်များကိုပေးသောကိစ္စတွင်သီးခြားစာရွက်စာတမ်းများအတွက်တိကျသောတပ်ဆင်မှုအတွက်တပ်ဆင်စေခြင်းငှါ provided.These ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို...
Tags: : ဒီဇယ်မီးစက်တစ်စုံ ဒီဇယ်အင်ဂျင် Generator ကို အနိမျ့ဆူညံသံဒီဇယ် Generator ကိုသတ်မှတ်မည်
တစ်ဦးမီးစက်တစ်စုံများအတွက်ကြားနေ-ကမ္ဘာမြေ Link ကို (နဲလ်)
အဆိုပါခင်မှာ မီးစက်တစ်စုံ operated ဖြစ်ပါတယ်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာတိုင်ပင်ကျေးဇူးပြုပြီး တစ်ဦးနဲလ်တပ်ဆင်ထားပြီးရှိမရှိတည်ထောင်ရန်ကုန်သည်။ site ကိုတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးထက်ပိုနဲလ်အန္တရာယ်မကင်းဖြစ်မည်အကြောင်းကြောင့်ရန်အရေးကြီးပါသည် တဦးတည်းပြီးသား site ပေါ်တွင် install လုပ်ထားပြီရှိမရှိတည်ထောင်ရန်။ မူတည် တိကျသောထုတ်ကုန်တပ်ဆင်ခအပေါ်တစ်ဦးကြားနေ-ကမ္ဘာမြေ Link ကိုအပေါ်လိုအပ်သောစေခြင်းငှါ သင့်ရဲ့မီးစက်တစ်စုံ။ သင့်ဒ...
Tags: : Generator ကိုသတ်မှတ်မည် ဒီဇယ် Generator ကို တရုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင် Generator ကို